Blogger နဲ့Reader … internet ရင်ပြင်မှာ | Layma's World
« သို့… သူငယ်ချင်း ( ၂ ) လေးမ အကြောင်း တစေ့တစောင်း »
ShwunMi_ရွှန်းမီ, on August 25, 2008 at 4:16 am said:
မလေးမကတော့ လုပ်ပြီ။ အထာပေးတာ မဟုတ်ရပါဘူး..။ ပေးသွားတယ် လို့လဲ မထင်တတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အစ်မကို သိနေတာပဲဟာ။
ဒါကြောင့်များ အွန်လိုင်းမှာ ပျောက်နေတာလား။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲတမ်း စကားပြောနေဖို့ မအားတဲ့အခါ၊ အားလပ်ချိန်တွေ မတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ၊ . . ကိုယ့်ထင်ရာမြင်ရာတွေ အားလုံးကို ပြောပြချင်တဲ့အခါ.. ကိုယ့်ရင်ထဲက အရာတွေ ခံစားကြည့်စေချင်တဲ့အခါ.. အဲလို အရာတွေ များလာလို့ ဘလော့မှာ ရေးမိတာပါ။
ကိုယ်မအားလည်း အားတဲ့အခါ ကြည့်လိုက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေ ရောက်လာတယ်။ ခြေရာလက်ရာ ချန်ခဲ့တယ် ဆိုတော့ ပျော်တယ်လေ။
ပြီးတော့ ကိုယ်ပြောခဲ့တာ သူတို့ မမှတ်မိရင်လည်း ပြန်ကြည့်လို့ ရတယ်လေ။
သူတို့လဲ မှတ်မှတ်ရရ ပြောချင်တာ ပြောခဲ့လို့ ရတယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ပြန်သုံးသပ်လို့ ရတယ်။
ခံစားမှု တူတဲ့၊ မတူတဲ့၊ ရောင်စုံ သူငယ်ချင်း အသစ်တွေ ရလာတယ်။
. . . . တော်တော်တောင် များနေပြီ။
မောင်မျိုး, on August 25, 2008 at 10:00 am said:
မောင်မျိုး, on August 25, 2008 at 10:02 am said:
ဆွေးနွေးထားတာ မိုက်တယ်ဗျို့အဲ့ဒီအကြောင်းဖိုရမ်တွေမှာဖတ်ရပေမယ့် ၀င်မပြောတော့ပါဘူး တော့ပစ်ကိုတွေ့ ထဲက စိတ်ထဲကတော့တစ်မျိုးပဲ ။ ဖိုရမ်မှာ ၀င်မပြောရဲတော့ အွန်လိုင်းတက်တဲ့အခါ မက်ဆေ့လေးတင်လိုက်တော့ ပိုဆိုး( ဘလော့ဂါမဟုတ်သူများကိုယ်တွယ်မယ်တဲ့ ဘာကိုင်မှာလဲမသိဘူး) အဲ့လိုလေးတင်မိလိုက်တာ ဘာကိုင်ကိုင် ကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေ မဆိုင်ရင်အသာနေပေ့ါတဲ့ အောင်မငီးဗျာ အနော်မျိုး သေသင့်ပါတယ် ကြောက်လို့ ကမန်းကတန်း ပြန်ပြောင်းလိုက်ရတယ် နောက်နေ့ကျ ဗီဇကနေမရ ( MBS သတ်ပွဲ ) ဆိုပြီးတင်လိုက်ပြန်ကော မင်းက ဘလော့ဂါမဟုတ်လို့ လားကွ ဒီလိုတော့မတင်သင့်ပါဘူး ဘာဘာညာညာတွေ တုံးတုံးတုံးနဲ့တက်လာလိုက်တာ ကျနော့်မှာ (မှားလို့ခင်ဗျ MBS ချစ်ကြည်ရေးပွဲ) ပါလို့ပြန်ပြင်လိုက်ရတယ် :P။ ရီဒါတွေရှိမှ ဘလော့ဆိုတာ စည်တာပဲ ဘလော့မရေးပဲဖတ်နေတဲ့သူတွေရှိသား မလေးမ ဆီမှာဆို ကျနော်ဘလော့မရေးခင်ထဲက ရီဒါအနေနဲ့ပို့ စ်တွေဖတ်နေကျ ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘလော့ဂါပါဆိုပြီး တစ်ခါမှလည်းစိတ်ကြီးမ၀င်ပါဘူး ကိုယ်ရေးနေဖို့လောက်ပဲစိတ်ထဲထားတာ အထာနဲ့ ဆိုတာကိုတော့ လက်မခံပါခင်ဗျာ ဒါကတော့ ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်ပေါ်မှာမူတည်မှာပေါ့ အထာကိုင်ချင်ရင် တစ်ပြားမှမရတဲ့ ဒီလိုနေရာမှာ မကိုင်ဘူး အထာကိုင်စရာနေရာတွေအများကြီး အဲ့လိုထင်မှာစိုးလို့ကျနော့်မှာ အသစ်တင်ထားပါတယ် လာဖတ်ပါအုံးလို့ လည်းတစ်ခါမှမပြောဖူးဘူး ဆီပုံးမှာလည်း လင့်မထားခဲ့ဘူး ပျင်းလို့။သူ့ ဆီသွားရင် သူတင်ထားတဲ့ ပို့ စ်နဲ့ ဆိုင်တာပဲပြောခဲ့တယ် ။ကဲ…ပြောချင်တာတွေတော့များသား ပြောတော့ပါဘူးလေ 😛
သချိုင်းကို ချီတက်နေတဲ့ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေထဲကတစ်ယောက်ပါခင်ဗျာ…
အထာမကိုင်သော ဘလော့ဂါ ငကြောင် 😀
ဝေလေး, on August 25, 2008 at 10:46 am said:
ကိုယ့်ထင်ရာမြင်ရာတွေ အားလုံးကို ပြောပြချင်တဲ့အခါ.. ကိုယ့်ရင်ထဲက အရာတွေ ခံစားကြည့်စေချင်တဲ့အခါ.. အဲလို အရာတွေ များလာလို့ ဘလော့မှာ ရေးမိတာပါ။
အသစ်တင်ထားတယ် ဘာညာမကြော်ငြာဖူးဘူး.. ကြိုက်လို့သွားလည်တယ်..
ဆီပုံးမှာသွားကြော်ငြာ… လင့်တွေပေးခဲ့…. ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်. ကွန်မန့်တွေပေး ဒါတွေလည်းတွေ့မိသေးတယ်….. ပြောတော့ပါဘူးးးးး
သချိုင်းကို ချီတက်နေတဲ့ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်လေးတစ်ယောက်ပါဗျ….
p.s ရေးထားတာတွေ စကားလုံးသုံးနှုန်းထားတာတွေရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်မမ.. ခံစားချက်တွေမျိုသိပ်ထားရတာများတော့လည်းပေါက်ကွဲသွားတယ်…. တောင်းပန်ပါတယ်
THS, on August 25, 2008 at 10:54 am said:
အစ်မက ဘာဂိမ်းတွေ ဆော့တာလဲ … 🙂
SoeMoe, on August 25, 2008 at 12:26 pm said:
လည်ရင်းနဲ့ တွေ့ သမျှဂိမ်းကိုကစားနေတာ
chaos, on August 25, 2008 at 12:48 pm said:
ဟုတ်ပါတယ် ဘလော့ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီလေးတစ်ခုလိုပါပဲ…..ဒိုင်ယာရီဆိုတာ စာအုပ်မှာရေးရင် ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲဖတ်ခွင့်ရှိတယ်လေ။ ဘလော့ကတော့ ကျွန်မအတွက် မလျှို့ဝှက်တဲ့ ဒိုင်ယာရီတစ်ခုလိုပါပဲ။ အတွေးတူ၊ အမြင်တူတွေ ၀င်ဆွေးနွေးမယ်။ ကွန်မန့်လေးတွေဝင်ပေးမယ်။ အသစ်မတင်နိုင်လဲ ဖတ်ချင်တာရှိရင် လိုက်လည်မယ်။ လိုက်ဖတ်မယ်။ ဟိုတစ်နေ့ကပဲ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်တော့ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က ဘာပြောလဲဆို နင်ဘလော့ရေးနေသေးလားတဲ့။ နင်တို့ဘလော့ဂါတွေ ကြော်ငြာထည့်ကြသေးလားတဲ့ ဆီပုံးမှာလေတဲ့။ သူပြောလိုက်တာ ရုတ်တရက်ရှက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်က ကုန်ပစ္စည်းမှမဟုတ်တာ။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာကလဲ ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက် ကြေငြာစရာ မလိုအပ်ဘူးလေ။ သူ့စာကိုယ်ဖတ်၊ ကိုယ့်စာသူဖတ်ရင်းနဲ့ အမြင်ချင်း ဖလှယ်တဲ့ သဘောတွေပါ။ ထားပါ။ ကဗျာတစ်ပုဒ်၊ စာတစ်ပိုဒ်ကို ရေးမိတယ်ဆိုရင် ရင်ဘတ်ထဲက ထွက်လာတဲ့စာတွေပါ။ ရင်ဘတ်ထဲကထွက်လာတာကို ရင်ဘတ်နဲ့ခံစားပေးတဲ့လူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့။ ချစ်မရင်ဘတ်ထဲက စာသားတွေကို ကောက်ထည့်တွားတယ်။
လေးသွားလို့ သုံးထုလောက် ပြန်ချသွားတယ်။
MhawSayar, on August 25, 2008 at 2:30 pm said:
Great ပဲ. Dialogue တွေကတော့… ဘလော့ဂ်လောက ကို သေသေချာချာနားလည်ဖို့ နှံ့နှံ့စပ်စပ်ကြိုးစားဦးမှ ရမယ် 🙂
200 မြောက်ပို့စ်ကို 2-ခါတိတိ အစအဆုံး ဖတ်ရှုသွားပါကြောင်း.
ပီကေ, on August 25, 2008 at 9:58 pm said:
အဟေးဟေး … (ကိုရင်ညိန်းထံမှ တရားမ၀င် ငှားရမ်းသုံးစွဲသည်)
အထာမဟုတ် ကဗျာတစ်ပုဒ်တော့ ရေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ကြောင်းတည်း။
လေးမ၊ စီမီနာ တက်မယ်မလား။ တွေ့ကြသေးတာပေါ့။ ဟတ်ဟတ်။
nu-san, on August 25, 2008 at 10:19 pm said:
လေးမရေ.. အထာပေးတာ ဟုတ်ဘူးနော်.. 😛 ညီမလေးကို ချစ်လို့ ခင်လို့ ဒီလို ရေးဟန်တွေကို သဘောကျလို့ ခိုက်လို့.. (ဟာ.. ရှုတ်ကုန်ပြီ..) လာအားပေးတာ။ အလကားစတာပါ လေးမရေ.. အမတို့က အပြင်မှာလည်း မမြင်ဖူးကြပါဘူးနော်.. ဒါပေမယ့် online ပေါ်ကနေ၊ ဒီ ဘလော့ခ်ကနေ ခင်မင်ရင်း သံယောဇဉ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ စာအသစ်မရေးနိုင်ရင် နေမကောင်းဘူးလား ဘာများဖြစ်နေတာပါလိမ့်ဆိုပြီး စိုးရိမ် စိတ်ပူနေတတ်တာမျိုးပါ။ ကိုယ့်ဘလော့ခ်ကို လာပြန်လည်တော့လည်း ၀မ်းသာတာပေါ့ သဘောကျတာပေါ့.. ဟုတ်ဘူးလား။ မလာလည်တော့လည်း အော်..ကိုယ်စာရေးတာ မကြိုက်လို့ မလာဘူးပေါ့ ဒီလိုပဲ ရိုးရိုးတွေးပါတယ်..
၂၀၀….. ၃၀၀…… ၅၀၀….. ၁၀၀၀… ၁၀၀၀၀ ထိအောင်ရေးနိုင်ပါစေ.. ဆက်လက်အားပေးနေမှာပါ… 😀
ညိမ်းညို, on August 26, 2008 at 12:24 am said:
အားလုံးဟာ သချိုင်းကို ချီတက်နေတဲ့ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပဲ…။ မသေခင် ဆုံကြရတာ… ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့နော…။ ။
အမလေးမရေ ဒီစာကြောင်း အကြိုက်ဆုံးပဲဗျာ။ ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲကကို ကဗျာဆိုလဲဟုတ် နီတိဆိုလဲဟုတ် တော်တော်ကို ဟုတ်နေတာ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးရ 🙂 🙂
ညမီးအိမ်, on August 27, 2008 at 2:24 pm said:
အရှေ့ကအစ်ကိုတွေအစ်မတွေပြောသွားတော့ပြောစရာကျန်တော့ဘူး။ ရှိတာပဲပြောတော့မယ်။ အထာလားပေးသွားတယ်ဗျို့။ ကျွန်တော်ဘလောခ်လာခဲ့ပါ။ လာရင်တော့ဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်…ပိုစ်အသစ်တွေမတင်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာ။ 😛 (နောက်တာနော်တကယ်လာခိုင်းတယ်ထင်ပြီ မလာ့ချင်လာချင်နဲ့လာနေမှာဆိုးလို့) ကျွန်တော်ကတော့ MBS ကြီးကိုကျော်ခိုင်းလာတယ်ဗျို့။ ရောက်စတုန်းကတော့ပျော်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ဘလောခ်အသိုင်းအဝိုင်းလေးတွေ စည်းစည်းလုံးလုံးသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းလေးဆိုတော့။ နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်ထင့်ပြီးမနေချင်တော့တာနဲ့ထွက်ခဲ့တာ။
Htoo Tay Zar, on August 27, 2008 at 4:06 pm said:
ဘာပြောရမလဲ မသိဘူးဗျာ.. =) ရီပြလိုက်မယ် =) ကျွန်တော်ကတော့ သတ်ပွဲလို့ မမြင်ဘူး ဆွေးနွေးတာလို့ ပဲ မြင်တယ်.. =)
mtj, on September 1, 2008 at 3:32 pm said:
အတင်းအုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ နားရွက်ကလေး ထောင်ပြီး ရောက်ရာအရပ်ကလာဖတ်တယ်။ ဒါပဲလားအတင်းက… 😛
မင်းကျန်စစ်, on September 19, 2008 at 2:10 am said:
မျှမျှတတလေးရေးပေးထားတာတွေ့တော့လဲ ဟိုမှာ စိတ်ပျက်ထားတာတွေ ပြန်ပြေသွားရတယ်။ ကျနော်ခေါ်ခဲ့မိလိုက်တဲ့ ဒီနေရာမှာ ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေလို့ မျက်နှာတောင်ပူသွားတာ။ တော်သေးတယ်။
ဒါနဲ့ ခုကွန်မက်ကို တွန်ခရုစ်စတိုင်လေးနဲ့ ရေးပေးသွားတာနော့ 😀
အညာသား, on September 21, 2008 at 12:07 am said:
အခုမှပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ် အစ်မရေ…။ အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါပဲ။